Odayaasha Buuhoodle “waa waajib in la iska difaaco qofka naftaada iyo maalkaaga ku soo duuley reer Buuhoodle is difaaca!” (Dhegayso ) – Radio Daljir
Odayaasha Buuhoodle “waa waajib in la iska difaaco qofka naftaada iyo maalkaaga ku soo duuley reer Buuhoodle is difaaca!” (Dhegayso )
Maajo 24, 2018 7:35 g 0
Odayaasha iyo waxgaradka Buuhoodle ayaa sheegay in dagaalka ka socda gobolka Sool uu yahay difaaca dalka iyo dadka Puntland oo ay sheegeen in Somaliland weerar gardaro ah kusoo qaaday.
Caaqil Cabdilaahi Xasan Qambi oo kamid ah cuqaasha ugu caansan gobolka Cayn oo la hadlay barnaamijka Caawa iyo Daljir ee ka baxa Radio Daljir ayaa sheegay in dagaalkan masuuliyadiisa ay qaadayso Somaliland uuna ku danbayn doono in dhulka Sool laga xoreeyo maamulka Somaliland.
“nin waliba wixiisuu leeyahay wuxuu dagaalku ku danbayn doonaa wax ninka dulmiga wadaa isku ciil kaambiyi doono”, ayuu yir Caaqil Qambi, isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in Muuse Biixi ka masuul yahay wixii ka yimaada dagaalkaasi “Muuse biixi ayaa belaayo u harga tumay isagaana wixii halkaas ka dhaca qaadi doona”, ayuu hadalkiisa raaciyey.
Mar uu ka hadlayey doorka reer Buuhoodle ee dagaalkaasi ayuu sheegay in gooblka Cayn qayb ka yahay difaaca dhulka wixii la gudboona ku dhaqaaqi doonaan.
“Waxaa nala gudboon waxa la gudboon kuwa hadda difaacaya dalka waajibkeenana waa qabsan doonaa,” ayuu yiri Caaqilku.
Ugu danbayn wuxuu ugu baaqay kuwa la safan maamulka Somaliland ee ka soojeeda gobolka Sool in ay dadkooda ku soo biiraan kana waantoobaan la shaqaynta cadowga.